Tetikasa PADAP: tanjona ny vokatra mitombo sy ny tontolo iainana voakajy | NewsMada
Tetikasa PADAP: tanjona ny vokatra mitombo sy ny tontolo iainana voakajy
Mitohy ny asa araka ny drafi-panajariana sy ny fitantanana maharitra ny tontolo ivelomana (paysage), novolavolaina teny ifotony niaraka amin’ireo sokajin’olona isan’ambaratongany voakasiky ny tetikasa.
Taona fahefatra amin’ny tetikasa izao ny PADAP (1). Mitohy hatrany ny asa na eo aza ny valanaretina, niteraka fahatarana eo amin’ny fanatontosana ny fandaharanasa. Amin’ny ankapobeny, manajary ireo lemaka mpamokatra vary manana olana amin’ny rano ny tetikasa, miaro ny tany tsy hihotsaka, manampy amin’ny fanamboarana ireo lalana famoaham-bokatra avy amin’ireo lemaka voajary na vao hohajarina ary miaro ny ala sy ny tontolo iainana manodidina.
Nofaritana ny fanatanterahana ireo asa ireo amin’ny alalan’ny PAGDP (2) na drafi-panajariana sy fitantanana maharitra ny tontolo ivelomana any amin’ireto disitrika efatra ireto: i Marovoay (Boeny), i Bealanana (Sofia), Andapa (Sava), Iazafo sy i Soanierana Ivongo (Analanjirofo). Tanjona ny fampitomboana ny vokatry ny fambolena ao anatin’ny fikajiana maharitra ireo harena voajanahary.
Entanina ny mpisehatra rehetra toy ny mpamboly, ny vondron’olona ifotony, hijery lavitra ka ny fahasamihafana ao anatin’ny tontolo misy azy no havadika ho tombontsoa hampiroborobo ny toekarena sy ny sosialy. Dingana maro ny natao nahafahana nandrafitra ny PAGDP: niainga tamin’ny fanomanana sy ny fampahafantarana teny ifotony, nandalo amin’ny fijerena ny manodidina, fanentanana ny rehetra, ary niafara amin’ny fametrahana ny drafitrasa sy ny fandaminana ireo asa voasoritra azon’ny tetikasa PADAP vatsina vola ny fanatanterahana azy.
Tohodrano ao Iazafo, Analanjirofo
Anisan’ny voafaritra ao anatin’ny drafi-panajariana PAGDP ny fanarenana ireo tohodrano ao amin’ny lemak’Iazafo, faritra Analanjirofo. 2 000 ha amina 5 000 ha ny voajary amin’ny dingana voalohany, mitsinjara any amin’ny kaominina Mahanoro, Ampasimazava, i Maromitety ary Antanamarina. Natao ihany koa ny fanadiovana sy ny fanamboarana lakandrano 42 km. Nahafahana nampitombo ny velaran-tany voatondraka sy voavoly ary nampiakatra ny taham-bokatra sy ny voka-bary ao an-toerana ny fahavitan’ireo asa fanarenana ireo.
Tsiahivina fa nahazoana famatsiam-bola 107 tapitrisa dolara ny tetikasa: ny Banky iraisam-pirenena, 65 tapitrisa dolara (trosa) ; ny AFD, 26,6 tapitrisa dolara (trosa) ; ny Tahiry ho an’ny tontolo iainana eran-tany,13,7 tapitrisa dolara (fanomezana), ary 1,7 tapitrisa dolara ny anjaran’ny firenena malagasy. Mbola mitohy ny asa amin’ireo distrika hiasan’ny PADAP.
PADAP (1) : Projet Agriculture Durable par une Approche Paysage
PAGDP (2) : Plan d’Aménagement et de Gestion Durable du Paysage